ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို (၆)ကြိမ်မြောက်ရယူဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ ဘရာဇီးလ်
16 Jun 2018 . 7:32 PM
ဘရာဇီးလ်ဆိုတာက ပရိသတ်တွေကို ထူးထူးခြားခြား မိတ်ဆက်ရမယ့် အသင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပီလီ Pele က အစပြုလို့ ရိုမာရီယို Romario၊ ဒွန်ဂါ Dunga၊ ရော်နယ်လ်ဒို Ronaldo၊ ရီဗယ်လ်ဒို Rivaldo၊ ရော်နယ်လ်ဒင်ဟို Ronaldinho တို့လို ကြယ်ပွင့်ကစားသမားတွေ အများကြီးထွက်ပေါ်ခဲ့သလို အခုအချိန်မှာလည်း နေမာ Neymar၊ ကော်တင်ဟို Coutinho၊ ဂျေးဆူ Jesus စတဲ့ နာမည်ကြီးကစားသမားတွေ ရှိနေတဲ့ အသင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို အကြိမ်အများဆုံးအဖြစ် (၅)ကြိမ်အထိရခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလ်အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖ လား ပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာ ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းစားတဲ့အသင်းစာရင်းထဲ အမြဲပါဝင်ခဲ့တယ်။ အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပခွင့်ရခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတုန်းက ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ဂျာမနီကို (၇-၁)ဂိုးနဲ့ အရှက်တကွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး (၆)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုနဲ့ လွဲချော်ခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလ်အသင်း ဒီတစ်ကြိမ်ပြိုင်ပွဲမှာ သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ် . . .
ဘရာဇီးလ်အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၉၃၀ က စပြီး လက်ရှိ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအထိ အကြိမ်တိုင်း ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ တစ်သင်းတည်းသော အသင်းအဖြစ် ရပ်တည်နေတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလား ချန်ပီယံဆုကို ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂၊ ၁၉၇၀၊ ၁၉၉၄၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွေမှာ ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး ဒုတိယ(၂)ကြိမ်၊ တတိယ (၂)ကြိမ်၊ စတုတ္ထ(၂)ကြိမ်စီရရှိခဲ့တယ်။ ဘရာဇီးလ်အသင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုကို တခြားအသင်းတွေ လိုက်မီဖို့က နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်ဦးမှာပါ။
ခြေစစ်ပွဲ အဖွင့်ပွဲမှာ ချီလီကို (၂-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း ဘရာဇီးလ်အသင်းက ရပ်တန့်လို့ မရတဲ့ ခြေစွမ်းမျိုး ပြသခဲ့ပြီး (၁၂)ပွဲနိုင်၊ (၅)ပွဲသရေနဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲကို အစောဆုံး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ ခြေစစ်ပွဲမှာ ဂျေးဆူ Jesus က (၇)ဂိုး၊ နေမာ Neymar နဲ့ ပေါ်လင်ဟို Paulinho က (၆)ဂိုးစီ သွင်းခဲ့ပြီး အသင်းအတွက် သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားတွေအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲက ကစားသမားစုဖွဲ့မှုထက် လက်ရှိ ဘရာဇီးလ်အသင်းရဲ့ စုဖွဲ့မှုက ပိုအားရဖို့ကောင်းနေတယ်။ အဓိက တိုက်စစ်မှူးနေမာသာရာနှုန်းပြည့်ကြံ့ခိုင်မှု ပြည့်ဝလာရင်တော့ ဘရာဇီးလ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်က ကြောက်ခမန်းလိလိဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ကွင်းလယ်မှာလည်း ကော်တင်ဟို၊ ၀ီလီယံ၊ ပေါ်လင်ဟိုတို့ရဲ့အစုအဖွဲ့က ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိနေသလို နောက်တန်းကို ကြည့်ရင်လည်း ဒဏ်ရာကြောင့် အဲလ်ဗတ်စ် Alves ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို လွဲချော်မှာဖြစ်ပေမယ့် သီယာဂိုဆေးလ်ဗား Thiago Silva၊ မာကွင်ဟို့စ် Marquinhos စတဲ့ကစားသမားတွေကြောင့် တောင့်တင်းမှုရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။
Photo:Goal,The Football Times,FIFA
ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုကို (၆)ကွိမျမွောကျရယူဖို့ အသငျ့ဖွဈနတေဲ့ ဘရာဇီးလျ
ဘရာဇီးလျဆိုတာက ပရိသတျတှကေို ထူးထူးခွားခွား မိတျဆကျရမယျ့ အသငျး မဟုတျပါဘူး။ ပီလီ Pele က အစပွုလို့ ရိုမာရီယို Romario၊ ဒှနျဂါ Dunga၊ ရျောနယျလျဒို Ronaldo၊ ရီဗယျလျဒို Rivaldo၊ ရျောနယျလျဒငျဟို Ronaldinho တို့လို ကွယျပှငျ့ကစားသမားတှေ အမြားကွီးထှကျပျေါခဲ့သလို အခုအခြိနျမှာလညျး နမော Neymar၊ ကျောတငျဟို Coutinho၊ ဂြေးဆူ Jesus စတဲ့ နာမညျကွီးကစားသမားတှေ ရှိနတေဲ့ အသငျးဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို အကွိမျအမြားဆုံးအဖွဈ (၅)ကွိမျအထိရခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလျအသငျးဟာ ကမ်ဘာ့ဖ လား ပွိုငျပှဲတိုငျးမှာ ဗိုလျစှဲဖို့ ရပေနျးစားတဲ့အသငျးစာရငျးထဲ အမွဲပါဝငျခဲ့တယျ။ အိမျရှငျအဖွဈ ကငျြးပခှငျ့ရခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတုနျးက ဆီမီးဖိုငျနယျမှာ ဂြာမနီကို (၇-၁)ဂိုးနဲ့ အရှကျတကှဲရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး (၆)ကွိမျမွောကျ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုနဲ့ လှဲခြျောခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလျအသငျး ဒီတဈကွိမျပွိုငျပှဲမှာ သူတို့ရဲ့ရညျမှနျးခကျြကို အကောငျအထညျဖျောနိုငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ . . .
ဘရာဇီးလျအသငျးဟာ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲစတငျကငျြးပခဲ့တဲ့ ၁၉၃၀ က စပွီး လကျရှိ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲအထိ အကွိမျတိုငျး ပါဝငျကစားခဲ့တဲ့ တဈသငျးတညျးသော အသငျးအဖွဈ ရပျတညျနတေယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလား ခနျြပီယံဆုကို ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂၊ ၁၉၇၀၊ ၁၉၉၄၊ ၂၀၀၂ ခုနှဈတှမှော ဆှတျခူးခဲ့ပွီး ဒုတိယ(၂)ကွိမျ၊ တတိယ (၂)ကွိမျ၊ စတုတ်ထ(၂)ကွိမျစီရရှိခဲ့တယျ။ ဘရာဇီးလျအသငျးရဲ့ အောငျမွငျမှုကို တခွားအသငျးတှေ လိုကျမီဖို့က နောကျထပျ နှဈပေါငျးမြားစှာ ကွာမွငျ့ဦးမှာပါ။
ခွစေဈပှဲ အဖှငျ့ပှဲမှာ ခြီလီကို (၂-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့နောကျပိုငျး ဘရာဇီးလျအသငျးက ရပျတနျ့လို့ မရတဲ့ ခွစှေမျးမြိုး ပွသခဲ့ပွီး (၁၂)ပှဲနိုငျ၊ (၅)ပှဲသရနေဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲကို အစောဆုံး အောငျမွငျခဲ့တဲ့ အသငျးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တယျ။ ခွစေဈပှဲမှာ ဂြေးဆူ Jesus က (၇)ဂိုး၊ နမော Neymar နဲ့ ပျေါလငျဟို Paulinho က (၆)ဂိုးစီ သှငျးခဲ့ပွီး အသငျးအတှကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမားတှအေဖွဈ ရပျတညျခဲ့တယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲက ကစားသမားစုဖှဲ့မှုထကျ လကျရှိ ဘရာဇီးလျအသငျးရဲ့ စုဖှဲ့မှုက ပိုအားရဖို့ကောငျးနတေယျ။ အဓိက တိုကျစဈမှူးနမောသာရာနှုနျးပွညျ့ကွံ့ခိုငျမှု ပွညျ့ဝလာရငျတော့ ဘရာဇီးလျအသငျးရဲ့ တိုကျစဈက ကွောကျခမနျးလိလိဖွဈလာလိမျ့မယျ။ ကှငျးလယျမှာလညျး ကျောတငျဟို၊ ဝီလီယံ၊ ပျေါလငျဟိုတို့ရဲ့အစုအဖှဲ့က ထိပျတနျးအဆငျ့ရှိနသေလို နောကျတနျးကို ကွညျ့ရငျလညျး ဒဏျရာကွောငျ့ အဲလျဗတျဈ Alves ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို လှဲခြျောမှာဖွဈပမေယျ့ သီယာဂိုဆေးလျဗား Thiago Silva၊ မာကှငျဟို့ဈ Marquinhos စတဲ့ကစားသမားတှကွေောငျ့ တောငျ့တငျးမှုရှိတယျလို့ဆိုရမှာပါ။